Ndeipi Yakagadziriswa Cannabis Cultivation Ropafadzo Yemutero muIllinois?
Iyo yeCannabis Cultivation Rukudzo Mutero uye Cannabis Mutengi WeTerese i
Ko mutemo unoti chii nezve cannabis kurimwa rhafu mutero uye cannabis mutengi wevateresi muIllinois?
Article 60 uye 65 inoputsa maitiro ayo mutero wakaiswa pamabhizinesi e cannabis muIllinois. Chikamu makumi matanhatu chinotaura nezve Cannabis Cultivation Privilege Mutero muIllinois, iyo inotsanangura kuti mutero wakadii kubhadharwa, ndezvipi zvigadzirwa zvakakodzerwa mutero zvakare uye nemubhadharo unoitwa uye unodzosera zvakadzvanywa nevarimi ve cannabis. Chikamu 60, kune rimwe divi, chinotsanangura iyo Canannis Mutengi weChipo muI Illinois, kuti chii chinoita uye kuti chinounganidzwa sei kubva kune vatengi ve cannabis.
Verenga kuti udzidze zvakawanda nezveZvinyorwa makumi matanhatu & makumi matanhatu emitero muIllinois.
Kubva pazuva rekutanga raSeptember 2019, 7% ye cannabis yekurima mukana wemitero ichaiswa pane yekutanga kutengeswa kwe cannabis nevarimi mu Illinois. Dhipatimendi Revenue inochengetera kodzero yekuziva mutengo we cannabis apo;
(i) Mutengesi uye mutengi vanobatana
(ii) Kuendeswa kweiyo cannabis hakusi kuburikidza nehurefu hwekutakura
(iii) Mutengi anoshandura iyo cannabis kune yavo yekudyara sangano kana infuser zvekuti kukosha kweiyo cannabis hakugonekwe.
Chinyorwa ichi chinopa zvakare kuti mutengo wakamiswa neDhipatimendi unofanirwa kuenderana nekukosha kwezvimwe zvigadzirwa zvine humwe hunhu, hunhu, uye kushandiswa munzvimbo iyi. Uye kana pasina izvo zvigadzirwa, Dhipatimendi rinogona kufunga nezve zvigadzirwa mumatunhu akasiyana eIllinois.
Pasi peCannabis Cultivation Privilege tax muIllinois, ibasa remunhu ari kuita wekutanga kutengesa (murimi) kubhadhara mutero wakatemerwa. Vanotenga zvinotevera semasangano ekugadzirisa haana kodzero yekubhadhara mutero uyu. Mutemo, zvisinei, unobvumidza varimi kuti vadzosere ivo pachavo nekubhadhara imwe mutero wemitero mumitengo yavo.
Vese varimi ve cannabis vanoripa cannabis kurimwa rhafu mutero muIllinois vanofanirwa kunyorera chitupa kuburikidza neDhipatimendi remari. Izvi zvinoshandiswa zvinofanirwa kuitwa online sekuenderana nezvinodiwa neDhipatimendi.
Zvakakoshawo kuziva kuti vanonyorera vane marezenisi pasi peCannabis Regulation uye Mutero Mutero vanogona kukodzera kupihwa chitupa.
Kudzoka uye Kubhadhara kweCannabis Cultivation Rukudzo Mutero
Vanhu, avo vanobhadhara iyo cannabis kurimwa rhafu mutero muIllinois, vanofanirwa kudzoka pa kana isati yasvika makumi maviri neshanu yemwedzi yapfuura. Kudzoka kunofanira kutaura:
(1) Zita remutero;
(2) Kero yemubhadharisi, uye kero yepanyama yebhizinesi;
(3) Mwedzi wekutengesa teresa marisiti emwedzi yakapfuura;
(4) Mari yakatambirwa kubva panguva yekutengesa;
(5) Kuderedzwa sekudikanwa nemutemo;
(6) Mari inowanikwa mumwedzi inotevera mwedzi wekunyorera iyo inoshandiswa kuverengesa mutero;
(7) Mari yemutero yakweretwa;
(8) siginecha yomubhadhara; uye
(9) Chero humwe humwe humwe hunhu hunogona kudikanwa nebazi.
Zvese zvinodzoka uye kubhadhara zvinofanirwa kuitwa zvemagetsi. Vanobhadharisa vanoona zvichinetsa kubhadhara pamagetsi vanogona kukumbira iyo Dhipatimendi kuti isunungure yemagetsi chikuva.
Vanobhadhara mutero vanganzi vapinze kudzoka kwavo zvakasiyana kana kuti vazvisanganise pamwe nekudzoka kwemutero uri pasi peCompassionate Use of Medical Cannabis Pilot Program Act.
Vanobhadhara vanobvumirwa kuita mubhadharo wekota kana kana misi isati yasvika, gumi nemaviri, 7, uye zuva rekupedzisira remwedzi wega wega. Kana muridzi wemitero akakundikana kubhadhara kota katatu munguva kana kubhadhara mari isingasviki zvinodiwa, anogona kutarisana nezvirango kana kufarira. Kana iyo mari yakabhadharwa inodarika mutero unodikanwa, munhu anogona kukumbira chikumbiro chekukweretesa kusati kwapera mazuva makumi matatu mushure mezuva rekubhadhara.
Yese kubhadhara kweiyo cannabis kurimwa rhafu mutero yakadzingwa kuCannabis Regulation Fund.
Chii Constitutes Cannabis Mutengi Wemutero Unoshamisira mu Illinois?
Iyo Cannabis Mutengi weChipo cheTerese mu Illinois ichatanga kuiswa muna Ndira 1, 2020. Mutero uchaiswa kune vatengi ve cannabis mune mareti akasiyana seanotevera;
(1) Chero cannabis, kunze kweiyo yakagadzirwa-cannabis-yakamisikidzwa, ine yakagadziridzwa delta-9-tetrahydrocannabinol level kana pasi pazasi makumi matatu neshanu ichaunganidza mutero unozova gumi muzana wemutengo we cannabis.
(2) Chero cannabis, kunze kweiyo yakagadzirwa-cannabis-yakagadzirirwa, ine yakagadziridzwa delta-9-tetrahydrocannabinol level pamusoro 35% ichaunganidza mutero unozova 25% yemutengo we cannabis .; uye
(3) Chigadzirwa chinogadzirwa ne cannabis chichaiswa pamakumi maviri muzana wemutengo wekutenga.
Mashandiro eCannabis Mutengesi WeTerese muIllinois Anounganidzwa
Zvinoenderana nechiitiko ichi, mutengi wemitero yemutero unounganidzwa nevatengesi. Ivo vanoita izvi nekuwedzera mutero wemitero kumutengo unotengwa nevatengi kuti vawane iyo cannabis kubva kumutengesi.
Mari yemutero yaunganidzwa inobhadharwa pamitero yakataurwa pamusoro, iyo painofanirwa kudzoserwa kuDhipatimendi remari.
Kana mutengesi achibhadhara mutengi mutero wakawanda kupfuura unodikanwa neiye Cannabis Mutengi weTeresa muIllinois, mutengi ane kodzero yekukumbira kuti adzorere mari. Uye mune izvo apo mutengi asina kubhadhariswa mutero, ipapo mutengi anofanira kubhadhara musi wa20 kana mwedzi waitevera uchitevera mwedzi wekutenga.
Zvinoenderana nebumbiro remutemo, ibasa remutengesi kuunganidza iyo Cannabis Mutengi weChuma muI Illinois. Kunyangwe mutengesi we cannabis anounganidza mutero kana kwete, iyo yose mutero iyo inofanirwa kuunganidzwa inoshandura kune chikwereti icho mutengesi anofanira kubhadhara kune iyo nyika.
Kunyoresa kweCannabis Retailers
Vese vatengesi vanounganidza mutero pasi peCannabis Regulation uye Mutero Mutero vanofanira kunyorera mumagetsi kuitira zvitupa.
Bumbiro rinoti kuti mutengesi akwanise kupihwa zvitupa, vanofanirwa kupihwa marezinesi.
Kukurudzira Center Agent Kuzivikanwa Kadhi
Iri gwaro rekuzivisa rinozopihwa kuvarimisi vekudyara vanoita basa rekutarisira pamwe nekuona kuti nzvimbo idzi dzinoenderana nemutemo. Gwaro iri richazopihwa nebazi rezvekurima.
Wese mutengesi anodikanwa kuti achengetedze chinyorwa chakarurama che cannabis yakatengwa, yakabatwa, yakatengeswa, kana kuraswa. Vanofanirawo kuchengetedza mavovoice ese, marekodhi ekutengesa, mabhiri, uye mamwe mapepa akakodzera ane chekuita nekutenga kutengesa uye kurongedza cannabis.
Aya magwaro ekutenga anofanirwa kuchengetedzwa munzvimbo dzakapihwa marezinesi kwemazuva asingasviki makumi mapfumbamwe kubva pazuva rekutengwa kunze kwekunge paine waiver kubva kuDhipatimendi remari inotaurwa nekunyora.
Magwaro acho anofanirwa kunge aripo munzvimbo idzi panguva dzemaoko ebhizinesi uye anofanira kuwanikwa kuti aongororwe kubva kuvashandi veDhipatimendi uye vamiririri vane mvumo.
Vashandi veDhipatimendi vane simba rekusunga, kutsvaga mabhizinesi e cannabis, kana kutora cannabis kubva kumutengesi uyo anotyora chero kupihwa kupi kwekuita uku.
Iyo mitero yakatemerwa pane cannabis kugadzirisa kwayo kushandiswa muI Illinois inosungirwa zvakananga kune murimi uye mutengi we cannabis. Murimi we cannabis anobhadhara iyo yeCannabis Cultivation Privilege Mutero muIllinois kune rombo rekutora kubva pachivakwa, nepo mutengi achibhadhara Mutero weCannabis Mutengesi wepaI Illinois muripo wekushandisa cannabis.